Mpanentana eny amin’ny fiarahamonina, manohana tsara ny vaksiny mahazatra mandritry ny COVID19 | UNICEF Madagasikara
Mpanentana eny amin’ny fiarahamonina, manohana tsara ny vaksiny mahazatra mandritry ny COVID19
RAVAONASOLO Jeanne Emma, ​​46 taona, dia mpanentana eny amin’ny fiarahamonina « Agent Communautaire » ary niara-niasa tamin'ny Tobim-pahasalamana fototra (CSB2) Ambohimanarivo, Sampandraharaha misahana ny fahasalamam-bahoaka eny anivon’ny distrika (SDSP) Antsirabe1 (tanàna iray any atsimon’Antananarivo) nanomboka ny taona 2012. Tena tia ny asany izy satria hoy izy: « Tiako ny mifandray amin'ny olona ary reharehako ny manompo ny firenena amin'ny alàlan'ny maha-mpanentana eny amin’ny fiarahamonina ahy na dia mpilatsaka an-tsitrapo tsy mandray karama aza ireo mpanentana eny amin’ny fiarahamonina. » « Ny maha-mpanentana eny amin’ny fiarahamonina ahy dia nahafahako nampitombo ny fahalalako mikasika ny lafin’ny fahasalamana izay manampy ahy eo amin'ny fiainana andavanandro ary koa entina manampy ny mponina mba ho salama tsara. »
Ny Alatsinainy 05 Oktobra 2020 izao, ao amin'ny CSB2 ao Ambohimanarivo, no notanterahana ny lanonana fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fampidirana ny VAR2 (Vaksiny fanefitry ny kitrotro). Nanaraka renim-pianakaviana iray nitondra ny zanany hatao vaksiny I RAVAONASOLO Jeanne Emma. Raha ny tena marina dia nahavita nandresy lahatra an'i RAHANTANIRINA Elphine mba hanao vaksiny VAR andiany faharoa ny zanany kambana roa izy. Hoy ilay mpanentana eny amin’ny fiarahamonina: « Ny tena fahafaham-poko dia ny fahitako ny dingana vita sy ny fiovam-pitondran-tena teo amin’ireo fianakaviana nanaovako fanentanana. »
RAHANTANIRINA Elphine, ilay renim-pianakaviana noresahana teo, dia 30 taona ary manan-janaka 4, ka ny farany dia kambana (RAFANOMEZANTSOA Joary Setra sy RAFANOMEZANTSOA Diary Setra) teraka tamin'ny May 2019. Ny tranony dia adiny iray miala amin’ny CSB2 Ambohimanarivo raha atao dia an-tongotra. Tsy mahakivy azy tsy hamonjy CSB2 any Ambohimanarivo anefa izany toe-javatra izany mba hampanaoviny vaksiny ny zanany, satria resy lahatra amin'ny tombotsoan'ny vaksiny izy.
Ilay zanany kambana roa lahy dia efa vita vaksiny VAR tamin'ny faha-sivy volany. Raha ny fijoroana vavolombelona nataon'i RAHANTANIRINA Elphine dia: « Vita vaksiny tanteraka avokoa ny zanako 4 ary samy efa nahazo ny diplaoma fahavitan’ny vaksiny izy ireo. Rehefa natao vaksiny ny zanako dia tsapako fa tena matanjaka tsara foana izy ireo; ka na tratran’ny aretina aza izy ireo, dia tsy lafo loatra ny fitsaboana. Mikasika ireo zaza kambana roa, hatramin'ny nahaterahany dia mbola tsy voan’ny aretina mihitsy izy ireo, ankoatry ny fivalanana maivana izay tsy mila fikarakarana manokana hanasitranana izany. » Tamin'io andro io, rehefa nahazo ny fatran'ny VAR2 ireo kambana ireo dia nahazo diplaoma fahavitan’ny vaksiny, ka tamin’ilay endriny vaovao izany.
Araka ny nambarany, « Ny fisian'ireo mpanentana eny amin’ny fiarahamonina ireo dia manampy betsaka ahy amin’ny fikarakarana ny fahasalaman'ny zanako. Tena manaraka tsara ny hafatra ampitain'ireo mpanentana eny amin’ny fiarahamonina aho ». Ny fisian'ny COVID-19 dia tsy sakana ho azy amin’ny fanantonana tobim-pahasalamana satria araka ny filazany dia mahazo toky izy ho ireo fanentanana alefa amin'ny fampielezam-peo, na amin’ny alalan’ny « sono mobile » mitety fokontany, izay iandraiketan’ireo mpilatsaka an-tsitrapo avy amin’ny Vokovoko mena sy ireo mpanentana eny amin’ny fiarahamonina. Izany fanentanana izany dia miompana amin'ny COVID19, ary indrindra ireo fihetsika sakana ilaina ampiharina sy efa noraisina eny anivon’ny tobim-pahasalamana mba hisorohana ny fiparitahan’ny valan’aretina.
Ary farany, raha hiverenana indray ny momba an’i RAVAONASOLO Jeanne Emma, ​​dia nanohy ny andraikiny amin’ny maha-mpanentana eny amin’ny fiarahamonina azy izy, na dia nisy ny valan’aretina COVID-19 aza. Ankoatry ny asany ao amin'ny CSB2 Ambohimanarivo dia mitantana toby iray ho an’ny mpanentana eny amin’ny fiarahamonina hatramin'ny taona 2019 ihany koa izy. Tafiditra ao anatin’ny fampiharana ny Tetikasa PARN (Tetikasa fanatsarana ny vokatra ara-tsakafo) izany. Ny faniriany dia ny mba hahazoany bisikileta hanamorana ny fivezivezeny ao anatin'ireo sehatra isan-karazany sahaniny.
Fitohizan'ireo tolotra ireo mandritra ny valan’aretina COVID
Ny fanaovam-baksiny ny vehivavy bevohoka sy fizaham-pahasalamana mialoha ny fahaterahana dia laharam-pahamehana mandritra ny COVID-19